Mba ho fitahiana ho an'ny hafa - Church of God of Switzerland Switzerland
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2020-01 > Ho fitahiana amin'ny hafa
Ny Baiboly dia miresaka mazava momba ny fitahiana any amin'ny toerana 400 mahery. Ankoatr'izay, maro ireo zavatra hafa mifandraika mivantana aminy. Tsy mahagaga raha tian'ny Kristianina ny mampiasa an'io teny io eo amin'ny fiainany miaraka amin'Andriamanitra. Ao anatin'ny vavaka ataontsika dia mangataka amin'Andriamanitra izahay hitahy ny zanatsika, zafikelintsika, vady, ray aman-dreny, havana, namana, mpiara-miasa ary olona maro hafa. Ao anaty karatra fiarahabana isika dia manoratra hoe "Andriamanitra hitahy anao" ary mampiasa fehezanteny toy ny "Habakkuk a day bless". Tsy misy teny tsara kokoa hilazana ny hatsaram-panahin'Andriamanitra ho antsika, ary manantena fisaorana azy isan'andro isika. Mihevitra aho fa zava-dehibe ny fitahiana ho an'ny hafa.
Rehefa niangavy an’i Abrahama handao ny taniny Andriamanitra, dia nolazainy taminy izay nokasainy: “Izaho dia te-hahatonga anao ho firenena lehibe sy hitahy anao ary hataoko ho anarana lehibe, dia ho fitahiana ianao” (1. Mosesy 12,1-2). Hoy ny fanontana Baiboly Vaovao Fiainana: “Tiako ny hahatonga anao ho fitahiana ho an’ny hafa”. Manahy mafy an’io andinin-teny ao amin’ny Baiboly io aho ary manontany tena aho hoe: “Fitahiana ho an’ny hafa ve aho?”
Fantatsika fa ny manome dia sambatra kokoa noho ny mandray (Asa. 20,35). Hainay koa ny mizara ny fitahiantsika amin'ny hafa. Mino aho fa rehefa tonga fitahiana ho an'ny hafa dia misy hafa ihany. Ny fitahiana dia mandray anjara betsaka amin'ny fahasambarana sy fahasalamana na fanomezana avy any an-danitra. Mahatsiaro ho tsara kokoa ve ny olona sa voatahy eo imasontsika mihitsy? Sa aleonao miaraka amin'ny olon-kafa matoky tena kokoa amin'ny fiainana?
Amin’ny maha-Kristianina antsika dia tokony ho fahazavan’izao tontolo izao isika (Mat 5,14-16). Ny andraikitray dia tsy ny hamaha ny olan’izao tontolo izao, fa ny hamirapiratra toy ny fahazavana ao anatin’ny haizina. Fantatrao ve fa mandeha haingana kokoa noho ny feo ny hazavana? Mampamirapiratra ny tontolon'ny olona hitantsika ve ny fisiantsika? Moa ve isika amin’izany no fitahiana ho an’ny hafa?
Ny hoe fitahiana ho an’ny hafa dia tsy miankina amin’ny fandehan’ny fiainantsika. Rehefa tany am-ponja i Paoly sy i Silasy, dia nanapa-kevitra ny tsy hanozona ny toe-javatra nisy azy ireo. Nanohy nidera an’Andriamanitra izy ireo. Ny ohatra nasehon’izy ireo dia fitahiana ho an’ireo voafonja hafa sy ireo mpiambina ny fonja6,25-31). Indraindray ny zavatra ataontsika mandritra ny fotoan-tsarotra dia mety hahasoa ny hafa ary tsy ho fantatsika akory ny momba azy ireo. Raha manolo-tena ho an’Andriamanitra isika, dia afaka manao fahagagana amin’ny alalantsika Izy, nefa tsy fantatsika akory izany.
Iza no afaka mahalala hoe firy ny olona hifandraisana aminy? Voalaza fa mety hahatratra 10.000 ny olona iray mandritra ny androm-piainany. Tsy mahafinaritra ve raha toa ka afaka mahazo fitahiana ho an'ireo olona rehetra ireo isika, na kely na kely aza izany? Azo atao izany.Mety mila manontany fotsiny isika hoe: "Tompo ô, mba omeo tso-drano aho ho an'ny hafa!"
Soso-kevitra amin'ny fiafarana. Ity tontolo ity dia ho toerana tsara kokoa raha mampihatra ny fanjakan'i John Wesley:
“Ataovy izay azonao atao araka izay vitanao
miaraka amin'ny fomba rehetra arosonao
amin'ny fomba rehetra azo atao
amin'ny fotoana rehetra na aiza na aiza misy anao
manoloana ny olona rehetra ary
raha mbola azo atao. »